Waa maxay sababaha gaalnimada caadifadaysan | Bezzia
Maxay yihiin sababaha gaalnimada niyadeed
Maria Jose Roldan | 13/09/2021 22:39 | Xiriirka
Dadka intooda badan waxay caadiyan ku xiraan gaalnimada dhinaca galmada, Si kastaba ha ahaatee, waxa loo yaqaan gaalnimo caadifadeed ayaa iyaduna dhici karta. Xaaladdan oo kale, khiyaanada lammaanaha ayaa u dhacda si saameyn leh. Gaalnimada shucuureed ee aan soo sheegnay aad bay uga adag tahay in la ogaado marka loo eego gaalnimada galmada oo aad bay uga badan tahay sidaad u malaynayso.
Maqaalka soo socda waxaan kaga hadli doonaa gaalnimada nuucaan ah, sababaha keena iyo sidee looga gudbi karaa.
1 Gaalnimo caadifad ama dareen leh
2 Maxay yihiin sababaha gaalnimada niyadeed
3 Sida looga gudbo gaalnimada caadifadeed
Gaalnimo caadifad ama dareen leh
Sida gaalnimada galmada, gaalnimada caadifaddu waa khiyaano weyn oo lammaanaha ah waxayna badiyaa kicisaa burburka badan ee maanta jira. Gaalnimada shucuureed waxaa jira khiyaano ku wajahan lammaanaha, mar haddii ay jirto hab dareen iyo saamayn ku leh qof saddexaad. Inta badan kiisaska, ayaa sheegay in gaalnimadu dhacdo sababtoo ah mid ka mid ah lamaanayaasha ayaa kaligiis dareen ahaan.
Gaalnimada shucuureed waxay u keeni kartaa qofka xanuunsanaya xanuun aad u weyn. Xitaa waxaa loo tixgelin karaa inay aad uga daran tahay gaalnimada galmada waana in ay jirto gebi ahaan ka tagid labada lammaane ee dareenka iyo saameynta leh. Dhibaatada ugu weyn ee gaalnimada noocaan ah waxaa sabab u ah inay aad u adag tahay in la ogaado gaala -galmo ahaan.
Waxaa jira sababo ama sababo badan oo qofka u horseedi kara inuu si qiiro leh u khiyaamo lamaanahooda. Isgaarsiin la’aanta iyo awood la’aanta muujinta dareenka kala duwan, waxay sababi kartaa qofka inuu go'aansado inuu helo xoogaa kalgacal ka baxsan xiriirka. La'aanta calaamadaha jacaylka ama kalgacalka ee lammaanaha ayaa inta badan ah mid kale oo sababa gaalnimada noocan ah. Xusuusnow in jaceylka ay tahay in la daryeelo maalin kasta mararka qaarna waqti la’aantu waxay keentaa in dad badan ay aakhirka dayacaan xiriirkii ay la lahaayeen dadka kale.
Joogtada ah iyo kalinimada lammaanuhu waa mid kale oo ka mid ah sababaha ugu badan ee gaalnimada shucuureed. Qaybta la ildaran caajiskan oo kale, go'aansado inuu bannaanka u raadiyo wax uusan ku lahayn xiriirka. Waxa caadiga ah ayaa ah in haddii lammaanuhu caafimaad qabaan oo uu jiro xiriir wanaagsan oo labadooda u dhexeeya, gaalnimada niyadeed ee aan soo sheegnay marnaba ma dhici doonto.
Sida looga gudbo gaalnimada caadifadeed
Sida galmada, aad bay u adag tahay in laga adkaado gaalnimada saamaynaysa. Xaaladaha qaarkood, khiyaanadan sida caadiga ah waxay ka dhigan tahay dhammaadka lammaanaha iyo xaaladaha kale, waxaa la isku dayaa in la helo xal lagu badbaadiyo xiriirka. Waxaa muhiim ah in dib loo bilaabo isgaarsiintii wanaagsaneyd oo si cad wax loola hadlo lamaanaha.
Markii hore aad bay u adkaan kartaa laakiin waxaa muhiim ah in dhinac la iska dhigo xanaaqa, xanaaqa ama xanaaqa oo la isku dayo in sida ugu dhakhsaha badan loo rogo bogga. Weydiisashada cafiska iyo aqbalaadda in cafiska uu yahay mid muhiim ah oo lama huraan ah, si lammaanuhu mar kale u rogo iyagoo aan wax dhibaato ah qabin.
Wadada buuxda ee maqaalka: Bezzia » Cilmu-nafsiga iyo lamaanaha » Xiriirka » Maxay yihiin sababaha gaalnimada niyadeed
Kukiyada leh shukulaatada madow, macaan!
Ku rakib aqalka lagu koriyo guriga oo ka faa'iidayso jiilaalka